Campaign Monitor: Iyo Yakasimba Email Service yeArhente kana Bhizinesi | Martech Zone
Campaign Monitor: Iyo Yakasimba Email Service yeArhente kana Bhizinesi
Muvhuro, March 16, 2015 Svondo, Kurume 15, 2015 Douglas Karr
Mumwe email mubatsiri webasa isu hatina kugovana zvakawanda nezvazvo is Campaign Monitor. Ivo vagara vairemekedzwa muindasitiri nekuda kwavo kwakatanhamara kunyorera, asi vakashanduka kuita yakasimba email sevhisi webasa kune bhizinesi kana vamiririri.
Zvimwe zveakasiyana maficha eCampaign Monitor
branding - Campaign Monitor haiwedzere inowaniswa nemalogo kune ayo anobuda maemail uye iyo mushandisi interface inogona kunyorwa kunyorwa kune yako agency kana bhizinesi.
iPhone Kuzivisa - Campaign Monitor yakagadzira chaiyo-nguva yekutarisa uye kunyorera kunyorera kwe iPhone.
famba - Tsika dzematemplate zvakagadzirwa kuitira vese vatengi desktop uye nhare mbozha. Iwe unogona zvakare kuongorora screenshots yedesktop kana nharembozha mukati meplatifomu mune vanopfuura makumi maviri vatengi.
Facebook Nyorera - A Facebook Nyorera Anwendung inoita kuti zvive nyore kudonhedza fomu yekusaina mukati rako Facebook peji.
Social Media - Kugovana munharaunda uye nekuzivisa kunopihwa.
Dynamic Zvemukati - Gadzirisa yakaratidzirwa zvinyorwa, mifananidzo kana zvimwe zvinhu zvinoenderana nechero tsika.
A / B Kupatsanura Kuedzwa - Edza misiyano miviri yemakampeni ako emaimeri, wobva watumira mutambi anonyanya.
Spam Kuedza - Mhanya mushandirapamwe wako kuburikidza neakajairwa spam mafirita pane desktop, server uye firewall level usati waatumira. DomainKeys, Sender ID, uye mhinduro zvishwe zvekuwedzera kununurwa.
Google Analytics - Teedzera otomatiki mushandirapamwe une chekuita nekutengesa uye shanduko muGoogle Analytics.
Ivo vanhu veMushandirapamwe Monitor vakatomboisa yavo email template muvaki kunze uko kune chero munhu wekushandisa! Vakachengetawo indasitiri yacho yakanakisa gwara reCSS rutsigiro mune email mutengi zvinoshandiswa.
Yakakura email mhariri, chidimbu, iyo API, uye yetsika templating injini zvakare chikamu cheiyo Campaign Monitor chikuva. Ive neshuwa yekuvawedzera kune ako runyorwa rweESP kuti uongorore!
Tags: agency email email mupiCampaign Monitorcss rutsigiro muemailemail mutengi cssemail service provideremail template muvakimaemail templateskunyanyanharembozha emailwhitelabel esp
3 Anoshamisa Matanho Kutsigira Yemagariro Kutengesa
Iko Kuderedzwa Kunodzikisira Chiratidzo Kupfuura Mahara?